Ministriin dhimma alaa Itiyoopiyaa Teewdroos Adaanoom VOAf waliin gaaffii fi deebii geggeessan
Sadaasaa 09, 2015
Muummicha ministeeraa Itiyoopiyaa Teewdroos Adaanoom
Ministriin dhimma alaa Itiyoopiyaa Dr. Tewdroos Adaanoom baatii Hagayyaa keessa VOA waliin gaaffii fi deebii geggeessanii turan. Kana irraa ka’uu dhaan dhaggeeffattoonni gaaffii hedduu nuuf erganii jiran.
Gaaffii dhaggeeffattootaaf deebii kennuu dura torbee xayyaarri Raashiyaa tokko Masrii keessatti kuftee caccabde haleellaa garee IS raawwatameen ta’uu mala jechuu dhaan ragaan dhaabolii basaasa US biraa argame ni mul’isa. Kun kan raawwatame naannoo biyyoota gaanfa Afriikaa waan ta’eef jecha balaan akkasii yoo dhaqqabe Itiyoopiyaan qophii attamii goote ka jedhu ture gaaffiin dura dhiyaateef.
Eeyee balaan xayyaara Sher Mahal-Shek irraa ka’ee gara Raashiyaatti balal’iaa ture irra ga’e amma iyyuu mirkanaa’aa miti. Akkuma ati jette hagi tokko ISI-tu boombii keessa kiyyesse. Kanaaf dho’e kan jedhan jiru.
Isis ofii isaas misaayilaan rukute jedhee jira. Xayyaarri sun garuu tarkaanfii kuma 30 ol fagaatee jira sababa ta’eef fageeya sana irratti meeshaa rukutu akka isaan hin qabaatin mirkanaa’eera. Boombiin jira ka jedhu shakkii dha. Rakkoo kan ofii isaas qabaachuu mala. Dho’iinsi sun kan mudate qilleensa irratti malee lafa erga ga’ee kan caccabe miti jedhama jedhanii Biyyi keenya qophooftee jirti. Kanaaf beelaa qabee hanga malaammaltummaatti gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru.
Gaffii fi deebii Dr. Tewdroos Adaanom waliin geggeessame dhaga'aa